ဘေးကင်းလုံခြုံကျောင်းများ | CAUSE
လုံခြုံသောကျောင်းများ LGBT ကျောင်းများတွင်ကျား၊ မရေးရာအတွေးအခေါ်များ
သြစတြေးလျတွင်ကျောင်းများရှိကလေးများအားသင်ကြားပို့ချသောလိင်တူချစ်သူအယူအဆများကို Safe Schools ဟုခေါ်သောအစီအစဉ်တွင်အစပြုခဲ့သည်။ မိဘများအနေဖြင့်အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်တင်ပြသည့်အမည်နှင့်ပုံစံသည်အကြိမ်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ပြုလုပ်နေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ဤကျားမအတန်းများတွင်ဆရာများအသုံးပြုသည့်ထပ်တိုးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Safe Schools အစီအစဉ်များကိုမသင်မနေရဟုဆိုသော်လည်းကျား၊ မအလိုက်အယူအဆသဘောတရားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးအစီအစဉ်များတွင်မသင်မနေရထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဤအစီအစဉ်များမှအချက်အလက်များကိုဤ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားပြီးပြီ။
အစောပိုင်း၌ဖမ်းခြင်း & နောက်ပိုင်းသင်ကြားရေးပစ္စည်းများအပေါ်ဖမ်းခြင်း
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် - Victoria Australia တွင်လုံခြုံသောကျောင်းများအစီအစဉ်များ
Binary PC Pack ကို
လူများသည် Safe Schools Programs အကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံကျောင်းများသားသမီးများ၏ယင်း၏ queer programming ကိုမာက်စ်ဝါဒီစည်းရုံးရေးမှူး Roz ရပ်ကွက် antibullying အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး
Politicalpostingmumma ဆွေးနွေးပွဲ "ကို Safe ကျောင်းများ"
YR8 IN တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသငျခနျးစာ!?!? - မာကု Latham
ဒါခေါ် '' ကို Safe ကျောင်းများ '' နှင့်အတူဒုက္ခအပေါ်တစ်ဦးကအဖေရဲ့ရှုထောင့်
ပိုပြီးမိဘများအစီအစဉ်ကိုရှုတ်ချအဖြစ်ကို Safe ကျောင်းများအငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပို. ရငျ့
သြစတြေးလျကျောင်းက children- များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယူအက်စ်အေ "ယဉ်ကွညျ့ရှု" ကို
မာကု Latham: ကို Safe ကျောင်းများ program ကိုသွားရရမယ်ဘယ်ကြောင့်သန်းခေါင်စာရင်းပြသ
လေးစားမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး - '' ကို Safe ကျောင်းများ '' 2.0?
ယင်းကို Safe ကျောင်းများညွန့်ပေါင်းအစီအစဉ်အထက်လွှတ်တော်မှမိန့်ခွန်း - Cory Bernadi
ကို Safe ကျောင်းများပုံ "ဘေးကင်းလုံခြုံ" ပါသလဲ အမတ်ဂျော့ခ်ျ Christensen
Wendy Francis က - အတွင်းပိုင်းကို Safe ကျောင်းများကဘာလဲ?